Maanta oo kale Aljeeriya oo ka xoroowday gumeystihii Faransiiska ee 132 sanno gumeeysanayey – Somali Integration Tv
Maanta oo kale Aljeeriya oo ka xoroowday gumeystihii Faransiiska ee 132 sanno gumeeysanayey
Maanta oo kale 5ta bisha luulyo sanadku markuu ahaa1962-dii, waxaa gobanimadooda hantiyey shacabka reer Aljeera, kuwaas oo ka xoroobay gumeeystihii Faransiiska oo dalkaasi gumeeysanay muddo 132 sanno.
Maanta oo kalena snadku markii ahaa 1918-kii, waxaa dhashay madaxweynihii hore Masar Sakariye Muxuyadiin. Ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadku markuu ahaa 1943-dii, waxaa dhacay dagaalkii loogu magac darray “dagaalkii Kursk, kaas oo ahaa mid aad u qaraar una dhaxeeyey Midowgii Soofiyeeti iyo dalka Jarmalka.
Maradona oo xaalad jaha-wareer ah la soo baxay SABABTU MAXEEY TAHAY?
Hey’addaHuman Rights Watch oo warbixin ka soo saartay falalka ka dhaca “Jeel Ogaadeen”